भ्रमण वर्षको कार्यविधि नहुँदा समिति अन्यौलमा - Janakpur Today
in कला, प्रदेश, समाज
जनकपुरधाम । भ्रमण वर्ष २०२० सुरु भएको एक सत्ता बितिसक्यो । नेपाल सरकारले भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्यिाउने दावी गरिरहेका छन् । भ्रमण वर्ष सफल बनाउन प्रदेशकोसमेत भूमिका खोजेको सङ्‍घीय सरकारले प्रादेशिक संयोजक पनि तोकेको छ । तर, संयोजकको काम, कर्तव्य र अधिकारसहितको कार्यविधि नबनाउँदा उनीहरू अलमलमा परेको बताएका छन् ।
भ्रमण वर्ष गत पुस १६ अर्थात् जनवरी १ का दिन उद्घाटन गरिसकिएको छ । यद्यपि, प्रादेशिक संयोजकलाई कार्यविधि बनाएर कामको जिम्मेवारी नतोकिँदा प्रदेश २ मा भ्रमण वर्षको तयारी हालसम्म शून्य छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन भन्दै प्रचारप्रसार तथा व्यवस्थापनका लागि सातवटै प्रदेशमा पर्यटन समिति बनाएपनि कार्यविधि नबनाउँदा आँफूहरु अलमलमा परेको भ्रमण वर्ष प्रदेश २ का संयोजक मनिष झाले बताए ।
कार्यविधि नहुँदा आफ्नो काम, क्षेत्र थाहा नभएको र अगामी योजनासमेत बनाउन नसकेको उनले बताए । कार्यविधि नहुँदा आफ्नो कार्याधिकार थाहा नभएको र अगामी योजनासमेत बनाउन नसकेको उनले जनाए । ‘हामीले के काम गर्ने ? के लक्ष्य निर्धारण गर्ने ? के उपलब्धि हासिल गर्ने ? कार्यविधि बनेकै छैन,’ संयोजक झाले भने, ‘राष्ट्रिय संयोजक समितिलाई कार्याविधि माग्दा मन्त्रालय देखाउँछ । मन्त्रालयले नेतातिर देखाउँछ । नेतालाई माग्दा फेरि सचिवतिर देखाउँछ ।’
सरकारले कार्याविधि नबनाउँदा पर्यटन प्रवर्दधन र प्रचारप्रसारका लागि मूल आयोजक समितिले प्रदेश समितिलाई दिएको २५ लाख रुपैयाँ खर्च त्यसै कारण हुन नसकेको उनले बताए । यद्यपि, भ्रमण वर्षको वातावरण बनाउन र समाजमा यसको स्वीकार्यता बढाउन पहिलोचरणमा सभा, गोष्ठी, समिति गठनलगायत कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेसम्म हामी एक्सनमा जानुपथ्र्यो, तर कार्याविधि नहुँदा काम गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ मा पर्यटकीयस्थलसमेत सरकारले पहिचान गर्न सकेको छैन ।’ सङ्‍घीय सरकार, प्रदेश सरकार र पर्यटन समितिले अहिलेसम्म औपचारिक कार्यक्रममा मात्र समय खर्चेको प्रदेश २ का उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले बताए । ‘पत्रपत्रिकामा मात्र लेखेर, मञ्चमा भाषण गरेर पर्यटन वर्ष मनाउन सकिँदैन । सबभन्दा पहिले हामीले पर्यटकीयस्थल पहिचान गर्ने हो,’ मन्त्री रायले भने, ‘करिब १२ दिनपछि यो कार्य सुरु हुन्छ । तिनै निकायले पर्यटकलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।’
विभिन्न चरणमा हालसम्म प्रदेश २ मा १० लाख बढी पर्यटक आइसकेका छन् । आए पनि उनीहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा टिकाएर राख्न नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार पर्यटकीयस्थल पहिचान गरेपछि स्थानीय सरकारसँगसमेत समन्वय गरी त्रिपक्षीय लगानी गर्दै पर्यटकीयस्थललाई सौन्दर्यकरण र व्यवस्थापनका लागि छलफल गरिनेछ ।
स्वास्थ्यचौकी प्रमुखको रजाइ,बिरामीलाई सास्ती